Aabe Soomaaliyeed oo xaaskiisi hore iyo Naftiisaba ku Dilay Koonfur Afrika |
Aabe Soomaaliyeed oo xaaskiisi hore iyo Naftiisaba ku Dilay Koonfur Afrika
Koonfur-afrika (estvlive) 04/01/2017
Iyadoo in badan oo kamid ah bulshada Somaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ay u dabaal-dagayeen dhalashada sanadka cusub ayaa mar qura waxa la maqlay geeri naxdin leh ka dib markii aabo Somaliyeed uu si bareer ah u dilay xaaskiisi hore.
Xasan Macalin Axmed oo 28-sano jir ahaa ayaa lix jeer ka badan madaxa xabad ugu dhuftay xaaskiisi hore oo lagu magacaabi jiray Deeqo Xasan Yuusuf ka hor intii uusan isna isku dilin goobta sida ay sheegeen dad goob-joogayaal ah.
Cabdulaahi Sheekh Mahad oo si wacan u garanayay lamaanaha ayaa sheegay in Xasan uu soo wacay Deeqo isaga oo ka dalbaday in uu arko gabadhiisa ,waxaana uu guriga yimid isaga oo gacanta ku wada alaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan.
“Waxa ay ka furtay albaabka ,waxaana ay u salaantay si caadi ah ,ma aysan ogayn qorshaha uu damacsan-yahay in iyo uu hoosta ku qarsanayay biskoolad-da uu ku dili doono ‘ ayuu yiri Mahad oo ka hadlayay sida wax u dhaceen.
“Markii ay ku noqotay qolkeeda ayuu u wacay ka dib Deeqo iyo gabadhii yarayd ayaa u yimid ,isla markiiba waxa uu biskoolad madaxa ka saaray Deeqo ,waxaana iyada oo qaylinaysa ay dhowr jeer ka codsatay in uusan dilin ,balse taasi kama aysan baajin in uu rasaas-ta madaxa kala dhaco Deeqo waliba gabdhiisa yarayd oo arkaysa“ ayuu mar kale yiri Mahad.
“Waxaa markiiba ay ku dhacday dhulka ,waxaana uu shan xabadood oo kale uu kaga dhuftay madaxa ,isaga oo isku dayay sidoo kale in uu dilo gabar goob-joog ka ahayd sida wax u dhaceen , balse waa ay ka orod-day waxna ma gaarin “ ayaa kamid ahaa hadalada C/laahi Sheikh oo si faah-faahsan uga warbixiyay dilkan.
C/laahi ayaa sheegay in Axmed uu isku dayay in uu goobta ka baxsado markii ay dadku maqleen waxa dhacay ,isaga oo koray dhakada sare ee dhismaha uu wax uu ku dilay isla markaana goobtii isku dilay.
Labada lamaane ayaa yaraantoodi isku garanayay Somalia ,waxaana ay is-qabeen muddo seddex sano ah ka hor intii aysan kala tagin sagaal bilood ka hor ,waxanaa la sheegay in xiriirkooda uu wanaagsanaa intii ay is-qabeen.
“Waxaa ay ahaayeen lamaane is-jecel , balse khilaafkooda oo batay awgii ayaa keentay in ay kala tagaan. Axmed iyo Deeqo waxa ay ku noolaayeen nolol caadi ah intii aysan kala tagin ,waxaana uu ka keensaday Deeqo wadanka Somalia si ay halkan ugu wada noolaadaan “ ayuu xusay Mahad.
Waxaa la sheegay in la isku garab aasay Axmed iyo Deeqo ,iyadoo gabadha ay dhaleen oo laba sano jir ahayd uu mas’uuliyad-deeda la wareegay mid kamid ah asxaabtii qoyska geeriyooday ,waxaana geeridan lagu tilmaamay in ay ahayd mid naxdin badan.
Ugu danbayn, Mahad ayaa sheegay in Somalida ku nool Koonfur Afrika aysan wali soo marin dhacdo caynkan oo kale ah ,waxaana uu sheegay in dilku uusan xal u ahayn khilaafaadka soo kala dhex-gala qoysaska Soomaaliyeed.